Imithetho ukukhanyisa kwezakhiwo zezimboni kukhona ukuhluka endlini ukukhanya. Okunqumayo lapha akukhona ukubukeka izibani, hhayi kanjani enjongweni ku design ingaphakathi kanye usizo nokuthi kuwe kutholakele ukukhanyiselwa emsebenzini. izibani PSC-60 kuthiwa ngokwesiko isetshenziselwe ukudala induduzo izitolo kanye emafektri. Cha, mhlawumbe isibani liyabonakala esengeziwe izitshalo eMbusweni omkhulu Russian Federation kuka-PSC.
Futhi ukuthandwa lokhu, naphezu ukuvela njalo izindlela ezintsha ukukhanyisa, sisekhona. Isizathu salokhu - yizinhlobonhlobo emangalisayo, ubulula design and ngesikhathi esifanayo afanayo iziqondiso ngempela elawula sanitary umlilo. Ngaphezu kwalokho, isibani PSC-60 eurodesign, kuyoba isendalini muva nje, ke ubhekana ukukhanyisa ka imihubhe kanye izitebhisi zezakhiwo ihhovisi, ngaphandle usaphatha ukubonakala emagcekeni.
Izimfuneko izibani ukusebenza
Izimfuneko ukukhanyisa imisebenzi ngoba izimboni ezahlukene ziyahlukahluka kakhulu. Ngakho, awukwazi qhathanisa izidingo ukukhanyisa, isibonelo, in the ishede kanye udokotela ohlinzayo yokusebenza. Kungakhanyi ukukhanya kwezindaba endaweni ethile isayithi ngokuvamile kulinganiswa e lux. Ukuze ezahlukene izimo zokusebenza nezimfuneko kuhluke:
kokukhanyisa izindawo ongaphandle inikeza umfutho kusuka 20 kuya 50 lux;
imihubhe, amavesi nezinye izakhiwo engasetshenziselwa ukukhiqizwa kwanoma yiphi izinhlobo umsebenzi ukukhanya 100 ... 200 lux;
izitolo, nemipheme, okuyinto ukuhambisa izimpahla, nezinye izakhiwo kanye izinhlobo zomsebenzi angadingi lokuhlushwa ekhethekile - 200 ... 500 lux;
emagcekeni ukuba yinkimbinkimbi komsebenzi zabantu abasesigabeni esiphakathi zaziba - 300 ... 750 lux;
ukukhiqizwa imisebenzi ephezulu - 500 ... 1000 lux;
uma abasebenzi bayanda izidingo, ukukhanyisa kufanele kube - 750 ... 1500 lux;
nezimfuneko ezithile - 1000 ... 2000 lux;
imisebenzi izinjongo ezikhethekile - kuka 2,000 lux.
Izinzuzo isibani PSC
Iziphi izici ukwenza izibani PSC-60 bathandwe kangaka?
Ukuba lula design. Ngesisekelo plastic infusible efakwe zonke izingxenye esebenzisa iziqobosho kochungechunge: E27 igobolondo ku block ubakaki uxhumano amandla supply, konke lokhu imbozwe ikhava ingilazi (icala yezokubona), okuyinto eqondiswa esebenzisa nezikulufi ezivamile.
Kalula inhlangano, disassembly, ukulungisa kanye uxhumano: cishe wonke umsebenzi wenziwa esebenzisa ithuluzi elilodwa - a screwdriver flat.
Naphezu inkimbinkimbi ukwakhiwa, izibani PSC-60 abe ngempela okuhle izici ekuvikeleni: idivayisi ukukhanyisa ngenxa uphawu ezinhle ingasetshenziswa izakhiwo kanye ezindaweni kuqhume, kanti izinto umswakama high, futhi ngaphezu kwalokho ngaphandle zonke izimo zezulu.
Ukuswelakala kokusebenza ngokuhlanganyela iyiphi ukukhanyisa elibalulekile (isibani ifakwe chuck jikelele E27) kwenza ukusetshenziswa kokubili ezivamile incandescent ama, amadivayisi energy esisindisa, nezibani ukonga kakhulu LED.
Ekhaya zalapho PSC-60 ngokuvamile esetshenziselwa ezindaweni zasemakhaya ukuze kungakhanyi ukukhanya kwezindaba izakhiwo kanye izakhiwo ngenhloso yezolimo, noma ukwakhiwa cottage. Nasi uhlu ezahlukeneyo njalo iningi labo lokusebenza:
onezitebele emadlangaleni nge high umthwalo ezivuthayo (Isibani eliphukile noma yamila ngeke kukwenze umlilo ngenxa ikhava ingilazi);
zokugeza kanye nezinye izakhiwo kanye nomswakama eliphezulu (isib zewayini kanye ezindlini);
kokukhanyisa izindlela engadini, yokupaka izimoto siqu kanye nezinye izindawo ezivulekile zingenza ukuhlela, usebenzisa isibani PSC-60 (ekuthoshweni kakhulu Izibuyekezo abashayeli bamaloli).
Kuye uya khona emagcekeni PSC-60 has ukulungiswa ezimbili eziyinhloko:
PSC-60 NBP 01-60 - for ezindaweni zezolimo ezivamile, iyatholakala ngaphandle lwezimpawu kanye igridi zokuzivikela ;
PSC-60M US - ngamagumbi nezimfuneko olwengeziwe lokuvikela nokuphepha umlilo - has a uphawu phakathi lens nomzimba, sensimbi noma anezikhala plastic, wire entry yenziwa ngokusebenzisa zenjoloba noma abicah uphawu.
Syech Polo Ralph Lauren, inthanethi izingubo esitolo
Caps isiqongo Direct: yiziphi futhi yini okufanele uyigqoke?
Isihenqo White kukhompuyutha ephathekayo namanye ukukhubazeka ohlangothini isithombe: izizathu nezindlela ukuxilongwa
Negesi endzaweni lephephile "esivuthayo". Izibuyekezo Customer kuzosiza ukuba enze ukukhetha!
Ubovu namathansela e ukwelashwa ingane futhi umbono eliyigunya Dr.